SIDA LOOGA SAARO BOODADA LAGA SOO QAADO BISADAHA GURIGA, KA SAAR HAL MAR IYO DHAMMAANBA - GURI, GURI
Way kuugu mahadsan yihiin! Sidee guriga ugu keenaa boodada ka soo jeeda bisadaha
Waxay u badan tahay inay adagtahay hadda in la helo qoys aan lahayn bisad, sababtoo ah iyada oo aan lahayn bisad waa agoonta!
Waxay na siiyaan dhibaatooyin badan, wayna jeexjeexayaan xayawaanka, waxay toosaan habeenkii, waxay ka xadayaan bolse miiska, laakiin wali waan jecelnahay ma qiyaasi karno nolosheena anaga oo aan haysan xayawaan gurmad ah.
Gaduud iyo madow, caddaan ah iyo caleemo, ciriiri iyo baaluqan, barafka caajis oo caajis ah iyo bisadaha oo iskooda ku socda - dhammaantood waa kuwa ugu caansan!
Calaamadaha ugu horreeya ee boodada
Joogitaanka baalasha bisadaha waxaa lagu qiyaasi karaa muuqaal ahaan.
Haddii dhogorta Murka ama Vaska ay qaro weyn tahay, waxay iftiimisaa qorraxda, iyo qalafsan - caafimaadka xayawaanka waa mid sax ah!
Haddii dharka ayaa si lama filaan ah u fadhiistay, isagoo xoqan, oo xayawaankuna nasan maayo. duleedyada ayaa ku wareegsan baalasha.
DAREEN! Boodhadhka marwalba marwalba wuxuu u muuqdaa xilliga diiran.
Halkee ayay xayawaankani inta badan ku nool yihiin?
95% dhismaha ay bislaantu ku nool yihiin dhulka hoostiisa, dhismayaasha guryaha, meelaha gaaban, jaranjarooyinka. Kediska oo keli ah, waxay inta badan keenaan dulin ka dib marka lala xiriiro bisadaha - "guri la'aan", oo ku wareegsan aagga cudurka qaba, sidoo kale waxay qaadi karaan dirxiga ama ukumaha boodada leh boorsooyinkooda.
MUHIIM! Xitaa milkiilayaashu, iyaga laftooda ma ogaan karaan, waxay noqon karaan kuwa kala qaybiya, iyaga oo keenaya guriga kabaha iyo dharka, maadaama ay ukumahoodu ku socon karaan cawska iyo lugaha.
Calaamadaha ugu waaweyn ee boodada ee bisadaha iyo bisadaha:
xayawaanku wuxuu bilaabmaa cuncun, si xoogan, furfuran u qaniinaa dhogorta;
xayawaanku wuxuu noqdaa mid dareen ah, wuxuu leeyahay cuncun maqaarka ah oo xayiraya xayawaanka nasashada iyo hurdada;
markaad isku dhajisid timaha dhoobada, dhiigga qalajiyey ama saxaro daad ah ayaa dhacaya;
nabarrada, cuncunka, cuncunka, timaha ka soo baxa, maqaarku waxay u muuqdaan maqaarka xayawaanka oo xoqan.
Dhibaatooyinka caafimaadka khatarta ah
Jiritaanka dulinka ku jira bisadaha ayaa horseedi kara cudurro halis ah. Burbur yaryar, isku darka jidhka iyo boodboodka, khatarta helitaanka gooryaan badan.
Daawooyinka yaryar ee dhedhexaad ah ayaa ah kuwa keena cudurada halista ah ee soo socda:
mycoplasmosis - waxyeelo u geysta xubnaha gudaha ee kala duwan, barar nadiif ah;
rickettsiosis - xayawaan qandho ah.
Hababka xakamaynta durugsan
Si aad uga takhalusto dulinyada waa in:
si taxaddar leh u shanlaynaya bisad;
si loo yareeyo cuncunka sii xayawaanka daroogada loo baahan yahay (sida ku xusan talada dhakhtarka);
isbeddel ama nadiifiso qashinka;
nadiifinta aqalka ama qolka xayawaanka ku nool.
DAREEN! Sidaa daraadeed, miisaankii Cat ee loo wareejiyo roogagga, roogga, alaab guri iyo dhar, sidaas darteed, nadiifinta guryaha ee loo baahan yahay waa lagama maarmaan!
Waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay fidinta bisadaha dulin. Kuwani waa dhibcooyin iyo shaambo, aerosols iyo irbado, budo iyo shukulaato, iyo sidoo kale daaweynta dadka.
Si kooban u sheeg daawooyinka
Daawada ugu fiican waa dhibcood ayaa lagu daboolay aagga xayawaanka iyo qoorta halkaas oo aan bisleynin iyaga oo aan laalin karin. Ugu caansan - Leopard, Khadka hore, Xoojin, Qareen, Advantagege, Kormeeraha.
Haddii xayawaankaagu uu jecel yahay in la maydho, isticmaal shamiibada Barsik iyo Biovax.
Kiniiniyada raaxeysiga waa kuwo wax ku ool ah, laakiin noocyada ugu caamsan ee daaweynta iyo daaweynta waa qoryaha.
MUHIIM! Daboolka waxaa loogu talagalay isticmaalka 4-7 bilood isticmaalka, haddii bisadkaaga ay qoryo dillaacaan, mararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad iska bixiso si aysan xayawaanku u qoynin qoortiisa mana jiraan wax xanaaq ah.
Waxaa la aaminsan yahay in saameyn weyn ku leedahay dagaalka ka dhanka ah boodada siinayaa ka soo baxaya qadhaadh ee gurigamaxaa yeelay, ninkeedii ayaa ka cabsada.
Markaad xoqdo xayawaanka natiijada wanaagsan waxay bixisaa isticmaalka saabuunta taranka, haddii, dabcan, xayawaankaaga ayaa u ogolaanaya inay iyaga dhegeystaan ​​dhegaha ilaa daboolka!
Haddii bisadu aysan tagin dibadda, markaas khatarta ah in laga soo qaado boodada isaga ka yaryahay, laakiin milkiilayaasha naftooduba waxay weerari karaan guriga. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad marar badan ku dhaqdo cagaha bisadasidaa daraadeed isagu ma seexanayo ukunta dulinka ah, iyaga oo sidoo kale si joogta ah u engegaya dhogor.
Haddii bisadu "socoto", markaa cabbirka ugu muhiimsan ee ka hortagga ayaa noqon doonta xirashada qoryaha ama dhibcaha dushooda, iyo sidoo kale u hoggaansamida shuruucda nadaafada jirka - nadiifinta biinanka kadib socodka.
Waxaan rajeyneynaa in talooyinkaan ka dib, xayawaanka aad jeceshahay ay marwalba noqon doonaan kuwo faraxsan, qurux badan oo caafimaad qaba!